Tag: mbupu | Martech Zone
Ecommerce Atụmatụ Ndepụta: Ultimate Must-Haves for Your Online Store
Thursday, June 29, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Otu n'ime akwụkwọ ndị kachasị ewu ewu nke anyị kesara n'afọ a bụ ndepụta atụmatụ weebụsaịtị anyị. Ihe omuma ihe omuma a bu ihe di egwu nke ndi ozo n’enyeputa ihe omuma di iche iche, Mgbasa Ozi MDG. Kedu ihe e-commerce na ebe nrụọrụ weebụ dị ezigbo mkpa nye ndị ahịa? Kedu ihe ndị ahịa kwesịrị ilekwasị anya oge, ike, na mmefu ego iji meziwanye? Iji chọpụta, anyị lere anya n'ọtụtụ nyocha, akụkọ nyocha, na akwụkwọ agụmakwụkwọ. Site na nyocha ahụ, anyị hụrụ nke ahụ
Thursday, June 29, 2017 Saturday, February 13, 2021
10 Ecommerce Trends Will Ga-ahụ Emejuputara na 2017
Wednesday, February 1, 2017 Tọzdee, Febụwarị 2, 2017 Douglas Karr
O teghị aka n’oge gara aga na ndị na-eri ihe anaghị enwe ntụsara ahụ na ha itinye data kaadị kredit ha na ntanetị iji zụta. Ha atụkwasịghị saịtị ahụ obi, ha atụkwasịghị ụlọ ahịa ahụ obi, ha atụkwasịghị mbupu obi… ha atụkwasịghị ihe ọ bụla obi. Otú ọ dị, ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, na nkezi ndị na-azụ ahịa na-eme ihe karịrị ọkara nke ihe ha zụrụ n'ịntanetị! Ejikọtara ya na ọrụ ịzụ, nhọrọ dị egwu nke nyiwe ecommerce, ebe a na-ekesa saịtị na-adịghị agwụ agwụ
3 Nhọrọ Mbupu Ecommerce na-ebugharị Àgwà havzụta
Monday, December 19, 2016 Douglas Karr
Oge ụfọdụ n'afọ gara aga, Omaha Steaks malitere ịkọwa oku ekwentị na nọmba Google Voice anyị a na-ebipụtabeghị. Anyị na-nkezi 20mails ozi olu kwa ụbọchị na ọnụ ọgụgụ na-amụba ka anyị na-eru nso Christmas. Emeela m email ha, kpọtụrụ ha na Facebook, ma enweghị ike ịme ha ka ha zaghachi 50 ma ọ bụ kpọọ oku ekwentị na-akọ akụkọ mbipụta ma ọ bụ ajụjụ gbasara iwu. Ọ bụrụ n’onwere onye si n’aka onye isi ha
15zọ XNUMX ị ga-esi bawanye ọnụego mgbanwe Ecommerce gị
Saturday, May 28, 2016 Sunday, December 24, 2017 Douglas Karr
Anyị na-arụ ọrụ na vitamin na ụlọ ahịa na-agbakwunye na ntanetị iji nyere aka mee ka ọhụhụ ọchụchọ ha na ọnụego mgbanwe. Nkwekorita a ewela obere oge na akụrụngwa, mana nsonaazụ ya amalitela igosi. Ejiri saịtị ahụ chọọgharị ma degharịa ya site na ala. Ọ bụ ezie na ọ bụ saịtị na-arụ ọrụ nke ọma na mbụ, ọ nweghị ọtụtụ ihe dị mkpa iji wulite ntụkwasị obi ma mee ka ntụgharị ahụ dị nro
Saturday, May 28, 2016 Sunday, December 24, 2017
Isi Ntuziaka 20 Na-emetụta Omume Ndị Ahịa E-Azụmaahịa
Sọnde, Febụwarị 28, 2016 Satọde, Febụwarị 27, 2016 Douglas Karr
Chaị, nke a bụ nnukwu nkọwapụta zuru oke ma mara mma nke ọma site na BargainFox. Nchịkọta ọnụ ọgụgụ n'akụkụ ọ bụla nke omume ndị na-eme n'ịntanetị, ọ na-enwupụta na ihe na-emetụta ọnụọgụ ntụgharị na saịtị e-commerce gị. A na-enye akụkụ ọ bụla nke ahụmịhe e-commerce, gụnyere atụmatụ weebụsaịtị, vidiyo, ojiji, ọsọ, ịkwụ ụgwọ, nchekwa, ịgbahapụ, nloghachi, ọrụ ndị ahịa, nkata ndụ, nyocha, nleba anya, ntinye aka nke ndị ahịa, mobile, Kupọns na ego mbupu, mmemme iguzosi ike n'ihe, mgbasa ozi mmekọrịta, ọrụ mmekọrịta mmadụ na ụlọ ahịa.
Thursday, June 4, 2015 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Anọ m na Chicago na IRCE ma nwee ọ enjoyingụ na mmemme ahụ. Ihe ngosi a buru ibu nke na ejighi m n’aka na m ga-emezu ihe omume a dum nyere ụbọchị di na nwunye m nọ ebe a - enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ dị ịtụnanya anyị ga-ede banyere ha. Isi nzuzu na-elekwasị anya na nsonaazụ ndị a tụrụ site n'aka onye ọ bụla gosipụtara ebe a na-enye ume ọhụrụ. Mgbe ụfọdụ, mgbe m gara mmemme ahịa ndị ọzọ, ụfọdụ nnọkọ na itinye uche na ọ dị ka
Thursday, June 4, 2015 Thursday, June 18, 2015
Nzọụkwụ 26 iji mepụta azụmaahịa Ecommerce na-aga nke ọma na 2015
Monday, April 20, 2015 Monday, April 20, 2015 Douglas Karr
Site na 2017, ahịa ecommerce na-eme atụmatụ iru $ 434 ijeri na United States. Anyị na-emepe emepe saịtị a ka ị gbakwunye ụfọdụ ngwọta na usoro ecommerce mgbe anyị nyochachara ụfọdụ ngwọta akụrụngwa afọ gara aga. Ọtụtụ ihe na-abịa na ọnwa ole na ole sochirinụ - anyị kwere nkwa! Ecommerce Platform mepụtara ihe omuma a na atumatu ecommerce nke ga enyere gi aka mepee ahia na adigide ma lekwasị anya na ihe ikwesiri ime ka i nwee ihe ịga nke oma, site na ichota
Ọyụ nke ingpị
Tuesday, October 9, 2012 Douglas Karr
Ecommerce bụ sayensị - mana ọ bụghị ihe omimi. Ndị na-ere ahịa kachasị n'ịntanetị ekpochapụla ụzọ maka ndị ọzọ site na itinye ọtụtụ puku nyocha nyocha na ịnye data nke ndị ọzọ iji hụ ma mụta ihe. Taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnụ ọgụgụ ndị na-ahụ maka ntanetị n'ịntanetị. Maka ndị na-ere ahịa, ọnụ ọgụgụ a gosipụtara ikike na-eto eto nke ịntanetị. Iji dọta ndị ahịa a jikọtara ọnụ, ndị na-ere ahịa ga-eme ka ịzụta na weebụsaịtị ha dị ụtọ,